GARBAHAAREEY ONLINE » Doorashada Guddoonka Baarlamaanka oo noqon doonta mid go’aamisa cida Madaxweyne noqoneyso (Warbixin)..
Doorashada Guddoonka Baarlamaanka oo noqon doonta mid go’aamisa cida Madaxweyne noqoneyso (Warbixin)..
Guux badan ayaa durba soo baxaya oo ku aadan loolanka loogu jiro xilkan iyo Musharaxiinta u ordeysa, waxaana laga yaabaa inay wax badan uga duwanaato doorashooyinkii hore.
Inkastoo nidaamka awood qeybsiga dowladihii u dambeeyay ee lagu soo dhisay ay ahaayeen wax cadaa, hadana waxaa shaki la gelinayaa inay wax iska bedeli karaan habkii hore awood qeybsiga ahaa ee saddexda xil ee ugu sareeya dalka.
Loolanka adag ee ka taagan kursiga Guddoomiyaha Baarlamaanka oo ay ku loolamayaan afar musharax ayaa waxaa xiiso u yeelaya sida isha loogu wada haayo oo ay cid walbana ay dooneyso inay sii ogaato shaqsiga noqon doona Madaxweynaha.
Taariikhda siyaasada Soomaaliya waxaa soo jireen u ahaa in xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka ay helaan beelaha Digil iyo Mirifle, marna ma dhicin tan iyo 1960 in shaqsi kale oo aan aheyn beelahaas inuu ku soo baxo xilkaas.
Doorashada sanadkan Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa waxay iska shabahaan tii sanadkii 2012, xilligaasoo ay isku soo sharaxeen Musharaxiin isku dhaf ahaa oo aan hal beel ka soo wada jeedin, hase ahaatee sida caadada aheyd waxaa xilligaas ku guuleystay nin ka soo jeeda Beelaha Digil iyo Mirifle.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaana ku guuleystay xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka, isagoo ka adkaaday Cali Khaliif Galeyr.
Laakiin doorashadan sanadkan waxay wax badan uga duwanaan kartaa tii 2012, waxaana tusaale loo soo qaadan karaa hardanka siyaasadeed ee ka dhex socdo Maamul goboleedyada qaar.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo Musharaxnimadiisa xilka Madaxweynaha aysan wali dhab noqon, ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii C/rashiid Xidig ugu guuleysan lahaa xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka, si ay ugu rumowdo riyadiisa ah inuu noqdo Musharax dhab ah.
Qamaarka siyaasadeed ee uu ciyaarayo Shariif Xasan ayaa la mid ah tii ka fashilantay sanadkii 2012, waxaana hadii uu mar kale guuldareysto waxay halis ku tahay mustaqbalkiisa siyaasadeed.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa dadaal badan ugu jira sidii mar kale xilkan dib loogu dooran lahaa, waxaa uu loolan adag kala kulmayaa C/rashiid Maxamed Xidig oo ka soo jeeda Beesha Daarood/Ogaadeen.
Is reeb reebka doorashada Gudoomiyaha baarlamaanka ayaana go’aamin doonta cida Madaxweyne dalka ka noqoneysa, markaas ayaa saadaal laga bixin doonaa meesha ay isugu biyo shuban doonto doorashada Madaxweynaha.
Natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka waxay shiiqin kartaa damaca Musharaxiin ka tirsan xilka Madaxweynaha, oo sida muuqata hadii nin ay isku beel yihiin uu xilkaas ku soo baxo ay daaqada ka saari doontaa Musharaxnimadii Madaxweynaha, waxaana ay saameyn doontaa Musharaxiinta kala ah Cumar C/rashiid iyo Shariif Xasan, maadaama hadii C/rashiid Xidig soo baxo ay sidaas ugu dhamaaneyso Musharaxiinta Beelaha Daarood oo ka wareegaya loolanka ay ugu jiraan xilka Madaxweynaha, hadii Jawaari guuleysta, ama labada Musharax kale ay iyana dhabar jab ku tahay Shariif Xasan oo sida muuqata isagoo aan Musharaxnimadiisa dhab noqon daaqada si toos uga baxayo
Doorashada kale ee xiisaha leh ayaa ah mida Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka, waxaana ugu cad cad Faarax Sheekh C/qaadir, Khadiijo Maxamed Diiriye, Jeylaani Nuur Iikar iyo C/wali Ibraahim Muudey.
Haddii Faarax Sheekh C/qaadir ku soo baxo Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka, markaas waxaa iska cad culeyska taageerayaasha Xasan Sheekh ku leeyihiin Baarlamaanka dhexdiisa, taasna ay dhici karto inay bilow u noqoto soo laabashada Madaxweyne Xasan Sheekh.
Laakiin haddii Faarax uu guuldareysto marka waa loo baqaya Madaxweyne Xasan Sheekh, maxaa yeelay codadka Faarax isku haleynayo ayaa ah inta badan taageerayaasha Xasan Sheekh iyo wixii uu la yimaado.
Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa iyana dooneysa inay taariikh u sameyso haweenka Soomaalida ayna noqoto haweenaydii ugu horeysay oo Guddoonka Baarlamaanka soo gasha.
Si kastaba Doorashada Guddoonka Baarlamaanka waxay go’aamin doonta halka ay aadayso natiijada doorashada Madaxweynimo, saadaasha waxaa laga yaaba inay dhinac kale u dhacdo maadama Siyaasadda ay la micno tahay Suuqa sarifka oo meeshii sarifka lacagaha qalaad xalay ku hoyday, waaberigiina weji kale yeesho.